June 8, 2021 - Channel Lover
သီခငျြးတှေ သံပွိုငျဆိုကာ ခဏတာ စိတျအပနျးဖွနေကွေတဲ့ PDF နဲ့ KNU ကရဲဘျောတှရေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ
June 8, 2021 by Channel Lover
ယနမွေ့နျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေကေတော့ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ အရာရာ ပိုကွပျတညျးလာကာ ပွညျသူတှကေ အခကျအခဲမြိုးစုံကို ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒီလို ကွုံတှလေ့ာတဲ့ ဒုက်ခတှကေိုလညျး အားတငျးကာ ရငျဆိုငျရငျး အမှနျတရားဘကျက မားမားမတျမတျ ရပျတညျကာ ဒီမိုကရစေီ ပွနျလညျရရှိဖို့ကို အငျတိုကျအားတိုကျ တဈဦးတဈယောကျစီတိုငျး ပါဝငျလှုပျရှားနကွေတာပါ နယျမွို့တှမှောဆိုရငျလညျး တဈဖကျနဲ့တဈဖကျ အပွနျအလှနျ ပဈခတျမှုတှေ ဖွဈပှားနကွေပွီး နတေို့ငျးလိုလို တိုကျပှဲတှေ ပွငျးထနျလကျြရှိပါတယျ။ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့နဲ့ တိုငျးရငျးသား အဖှဲ့အစညျးက ရဲဘျောမြားကလညျး အတူပူးပေါငျးပွီး ပွညျသူတှကေို အစှမျးကုနျ ကာကှယျဖို့အတှကျ အမွဲအသငျ့ရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ ဒါကွောငျ့လညျး ပွညျသူတှကေ သူတို့လေးတှကေို လိုအပျတာတှေ ပံ့ပိုးပေးပွီး တိုကျပှဲတိုငျး အောငျမွငျကာ အန်တရာယျကငျးစဖေို့ ဆုတောငျးပေးနကွေတာပါ တိုကျပှဲမှာလညျး အသကျကိုရငျးကာ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ ရှဆေုံ့းကနေ ခုခံကာကှယျကွသလို တိုကျပှဲနောကျကှယျမှာလညျး … Read more
အှနျလိုငျးမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ လူကာသောငျးမွငျ့နဲ့ဆုထကျမွတျ တို့ရဲ့ ငယျဘဝနဲ့ ယခုလကျရှိပုံမြား
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-1 အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-2အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-3အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-4အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-5အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-6အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကာသောင်းမြင့်နဲ့ဆုထက်မြတ် တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ ယခုလက်ရှိပုံများ-7အွန်လိုင်းမှာ … Read more
တနင်္ဂနွေ -ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1 -ရုပ်တည်ကြီးနေတတ်ပေမယ့်..တကယ်ခင်သွားရင်လဲသူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲမှာမျက်နှာအပြောင်ဆုံးကသူပဲ -အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ်ရတာမလိုလိုတာမရတွေလေ. -အစွဲလန်းလဲကြီးတယ်ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့မတူသလိုမုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူး… – အချောကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်ညို့အားအပြင်းဆုံးက အသံ💙 (အသံလေးကြားဖူးရုံနဲ့တင် စွဲလန်းသွားစေတာမျိုး🙉🙆‍♂🙆‍♀) တနင်္လာ -အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. 1 -တခုခုဆို အရမ်းပြတ်သားတယ်ပြောစရာရှိရင် ဘယ့်သူ့ကိုမှာ အားမနာတတ်ဘူး -မှန်တဲ့ ဖက်က ရပ်တည်တာမျိုးပေါ့.. -ရန်လိုတဲ့လူ နဲနဲများတယ် ဒါမယ့်ဘသူ့ကိုမှသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး…ဘလိုအခြေနေပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ် -အပေါင်းသင်းဆိုလဲ ရွေးပြီးပဲပေါင်းတယ် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော သိပ်မထားတတ်ဘူးအတုယောင်တွေကို မုန်းလို့တဲ့လေ – ညို့အားအပြင်းဆုံးက ခန္ဓာကိုယ်💙(ယောကျာ်းလေးဆို အရမ်းခန့်ပြီးမိန်းကလေးဆိုလဲ အချိုးအစားကျတယ်..ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်) အင်္ဂါ -ဆရာကြီး လုပ်တဲ့နေရာမှာ No.1 -ပြောသာပြောတာနော် သြဇာက အရမ်းညောင်းတယ် … Read more
Facebookသုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့သူတွေဟာ ဒါ တွေမလုပ်တော့ပါဘူး..
Facebookသုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့သူတွေဟာ ဒါ တွေမလုပ်တော့ပါဘူး.. သင်တကယ်လို့ Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါ ဒါတွေမလုပ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးနော် … (1) profile pic , cover pic တွေကို ခဏခဏ မပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး …။ (2) ကိုယ်စာမပြန်ချင်တဲ့ သူတွေဆို ဝင်သာဝင်ကြည့်ပြီး တိတ်တိတ်လေး ပြန်ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ် …။ (3) ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ post မျိုးဆို ဝင်ဆဲတာ ဝင်ပြောတာမျိုး မလုပ်ဘဲ မသိချင်ယောင်ဆောင် ကျော်သွားတတ်ကြပါတယ် …။ (4) မဟုတ်က ဟုတ်က လုပ်တတ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း တိတ်တိတ်လေးဘဲ unfriend လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ Unfollow လုပ်လာတယ် …။ (5) ကိုယ်နဲ့မတည့်သူတွေကိုလည်း မန်ရှင်းခေါ်ပီး ရန်ဖြစ်မနေဘဲ block ဘဲ … Read more
တောထဲမှာ အကောင်တွေကိုက်ခံရလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့(ဟားငါးကောင်)
လူရှငတွောတွဈဦးအဖှဈ ပရိသတတွှကေို ရယမွောပှောရွှငအွောငွ ဟာဒယရှငဆွေး တိုကကွှေးခဲ့သူကတော့ ပိုးလေးပဲ ဖှဈပါတယွ။ သူကတော့ ဟားငါးကောငွ လူရှငတွောအွဖှဲ့ဝငွ တဈဦးပဲ ဖှဈပှီးဖဖေောဝွါရီလအစကတညွးမှစပှီး ပှညသွူတှနေဲ့ အတူ လမွးမပေါထွှကပွှီး ဆနဒြထုတွ ဖောခွဲ့သူ တဈဦးလညွး ဖှဈပါတယွ။ အခုခှိနမွှာတော့ တောလွှနရွေးတိုကပွှဲအတှကွ လှတမွှောကနွယမွှတဈေ နရောတှငွ စဈ ပညာ သငွ ကှားနတော ဖှဈပါတယွ။ တောထဲမှာ နထေိုငစွဉအွတှငွး သူတို့ရဲ့ နထေိုငစွားသောကပွုံတှကေို ပှညသွူတှေ သိရှိရအောငွ အမှဲလိုလို ဝမှပေေးနတော ဖှဈပါတယွ။ မနကေ့လညွး ပိုးလေးရဲ့ လူမှုကှနယွကမွှာ ပုံလေးတဈပုံ တငထွားတာ ဖှဈပါတယွ။ ဒါကတော့ အကောငတွှေ အကိုကခွံ ထားရတာကှောငွ့ ကှောပှငတွဈခုလုံး အနီစကတွှနေဲ့ အနာတှပေါ ပေါကနွတောဖှဈပါတယွ။ သူတို့တှဟော တောထဲမှာ တာလပတမွိုးပှီး ဝါးလုံးမှားဖှငွ့ အိမလွေး ဆောကထွားကှတာ ဖှဈပှီးမိုးသညွးထနစွှာ ရှာတဲ့နတှေ့မှော အတောလွေးကို အဆငမွပှေ နထေိုငနွကှရတော ဖှဈပါတယွ။ ပိုးလေးကလညွး ” ဘာကောငတွှကေိုကတွာလညွးတော့မသိဘူး ” ဆိုပှီး ရေးသားထားတာ ဖှဈပါတယွ။ ပရိသတတွှကလညွေး အနာသကသွာစမယွေ့ ဆေးနညွးလေးတှေ ဝမှေ ရေးသားပေးနကှတော ဖှဈပါတယွ။ အခုလို ပှညသွူတှအတှကွေ ဒုကခြတှကေို ခါးစညွးခံပေးနကှသေူမှား အားလုံးကို ကှေးဇူးတငရွှိရငွး ဘေးအနတြရာယွ ကငွးရှငွးပှီး ခစှရွသူတှနေဲ့ အမှနဆွုံး ပှနလွညွ ဆုံဆညွးကှပါစလေို့ ဆုတောငွးပေးရငွး ဒီသတငွးလေးကို တငဆွကပွေးလိုကွ ရပါတယွ။ Source and Photo Crd-ပိုးလေး အဖာစနာဆရာကှီး’s Facebook Account [zawgyi] လူရှငျတျောတဈဦးအဖွဈ ပရိသတျတှကေို ရယျမောပြျောရှငျအောငျ ဟာဒယရှငျဆေး တိုကျကြှေးခဲ့သူကတော့ ပိုးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ ဟားငါးကောငျ လူရှငျတျောအဖှဲ့ဝငျ တဈဦးပဲ ဖွဈပွီးဖဖေျောဝါရီလအစကတညျး မှ စွ ပီး ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ လမျးမပျေါထှကျပွီး ဆန်ဒထုတျ ဖျောခဲ့သူ တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ တျောလှနျရေးတိုကျပှဲအတှကျ လှတျမွောကျနယျမွတေဈ နရောတှငျ စဈ ပညာ သငျ ကွားနတော ဖွဈပါတယျ။ တောထဲမှာ နထေိုငျစဉျအတှငျး သူတို့ရဲ့ နထေိုငျစားသောကျပုံတှကေို ပွညျသူတှေ သိရှိရအောငျ အမွဲလိုလို ဝမြှေပေးနေ တာ ဖွဈပါတယျ။ … Read more
ညက ကားတိုက်ခံရပီး သေဆုံးသွားတဲ့ မေသစ္စာမောင်
သူခွေးလေး ကလေးမွေးနေတာကို ကြည့်တောင်မကြည့်လိုက်ရတဲ့ LGBT Model မေသစ္စာမောင် ကံဆိုးတဲ့သမီးလေး မေသစ္စာမောင် ၊ အပြင်ထွက်နေတုန်း အိမ်ကသူမွေးထားတဲ့ ခွေးမလေးက ကလေးမွေးနေပီဆိုပီး ရရာ Taxi ကိုတောင်းပန်ငှါးပီး အပြန် ၊ မီးပွိုင့်မိနေတုန်း တဖက်လမ်းကြောကလာတဲ့ကားက သူ့ဘက်အခြမ်းကို ဖြတ်တိုက်လိုက်တာပါတဲ့…. သမီးရေ နောင်ဘဝ ဒီအဖြစ်ဆိုးမကြုံပါစေနဲ့ အမျှ အမျှ အမျှ ပါ Crd Model မေသစ္စာမောင် Car Accident ကြောင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန် LGBT Model မေသစ္စာမောင်က ဒီကနေ့ည ဇွန် ၇ ရက်တွင် Car Accident ကြောင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ဆေးရုံတွင် ဆုံးပါးခဲ့ကြောင်း သိရှိရတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း.. … Read more
ယခုအပတ်အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံ နိုင်တဲ့ ပြည်နယ်များ…
ယခုအပတ်အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံ နိုင်တဲ့ ပြည်နယ်များ… ထားဝယ် လောင်းလုံ ပုလော ပုလောက် မြိတ် ယခုအပတ်အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံဖြစ်နိုင်ပါတယ်….. Su Su San.. (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအနည်းငယ်မှ အားအသင့်အတင့်ရှိကာ၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ဒေသအလိုက်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ … Read more